Accueil > Gazetin'ny nosy > Jean RAVELONARIVO: Fanantenan’ny vahoaka amin’ny olan’ny tsy fandriam-pahalemana
Jean RAVELONARIVO: Fanantenan’ny vahoaka amin’ny olan’ny tsy fandriam-pahalemana
Tomefy olona tanteraka ny kianjan’ny Ankilizato, ka nisy mihitsy aza ny nanao sangisangy zary tenany hoe : « mbola misy olona tavela ihany ve ny any an-tranon’ny tsirairay ? ». Io no akon’ny fandalovan’ny Jeneraly Jean RAVELONARIVO tany an-toerana. Taorian’ny nametrahany ny antontan-taratasy takian’ny lalàna amin’ny maha kandida azy mantsy, dia maro ny Malagasy no velom-panantenana ka naniry fatratra ny hihaona aminy. Namaly ny antson’izy ireo araka izany ity farany, ka ny Alarobia 8 Aogositra 2018 teo dia nandalo teto Ankilizato, Distrikan’i Mahabo, izy sy ireo mpiara-dia aminy.
Ny mampiavaka ity Praiminisitra teo aloha ity moa, rehefa manao fidinana any ifotony toy izao, mba hitafa mivantana amin’ny vahoaka, dia noho izy tsy mitondra afa-tsy delegasiona vitsy dia vitsy izy ary tsy mba mitondra mpanakanto mba hisarihana olona. Sady tsy mbola andron’ny fampielezan-kevitra izao hoy izy ary ny olona rehetra dia ambanin’ny lalàna ary tokony hanaja ny lalàna. Tsy mahasakana ny olona tsy ho tonga anefa izany, fa dia vahoaka maro sesehena hatrany no mitsena ny lehilahy raha vao maheno fa handalo eo amin’ny toerana iray izy. Teto Ankilizato ohatra dia nitangorona tao amin’ny Kianja fanaovam-baolina ny vahoaka na dia somary mikisaka lavitra ny tanàna izany. Feno hipoka tanteraka hatramin’ny «tribune central» ny toerana ka dia voatery teo an-kianja teo afovoan’ny olona no nandray ny tsodrano avy amin’izy ireo ny tenany, mba nihaino ny hetahetan’izy ireo sy nanambara ihany koa ny programan’asany.
Isan’ny teny naverimberin’ireo izay nandray ny fitenenana moa ny hirifirin’izy ireo noho ny tsy fandriam-pahalemana aty amin’ity Faritra ity sy ny fahatokian’izy ireo fa ny Jeneraly Jean RAVELONARIVO dia afaka mamaha izany olana izany, toy ny efa nataony fony izy mbola teo amin’ny fitondrana.
Teto ihany koa ny tenany no nampahafantatra izay ho Talen’ny fampielezan-keviny ato amin’ny Faritanin’i Toliara, dia i Andriamatoa REBOZA Julien izany.
Nalai-misaraka taminy moa ireto vahoaka ireto koa na dia efa nadiva hilentika aza ny masoandro, ka niainga nanohy ny diany ity Praiminisitra teo aloha ity dia mbola nifanisika teo aminy hatrany izy ireo.
Ny ampitson’io kosa indray izy, izany hoe ny Alakamisy 9 Aogositra 2018, dia nandalo teto amin’ny Kaominina Mahabo. Hafaliana sy haravoana no nentin’ireo vahoaka nitsena azy. Tomefy olona tanteraka ny teo an-kianjan’ny Tranom-pokonolona.
Taorian’izany moa dia nisy tsodrano avy amin’ireo raiamandreny tao an-toerana. Ny zavatra nanaitra teto dia ny fahitana ankamaroan’ny olona avy amin’ny ankolafin-kery sy antoko samihafa, ary tsapa izany fanirian’ny olona fanovana izany ka tsy voazarazaran’ny pôlitika izy ireo.
Toa hita sahady teny amin’ny endriky ny tsirairay ny tsirim-panantenana fa ho avy ilay maraina hiainan’ny vahoaka malagasy indray ao anaty fandriam-pahalemana tanteraka.